Akụkọ - Ọrụ nke ngwugwu ígwè
Tin Box nkewa site na udi
Gburugburu Tin Box
Adọghị Tin Tin
Square na akụkụ anọ gbamgbam Igbe
Ihe onunu na Mmanya
Bisiki & Candy Tins
Mkpọ mkpọ mkpọ
Tii & Kọfị Tins
Mmanụ Mmanụ & mmanu
Ihe kpatara Byland nwere ike
1. A na-ahụta nkwakọ ngwaahịa metal nke ndị na-azụ ahịa maka ntụgharị ya na ntụgharị ya. Enwere ike ịhụ nkwakọ ngwaahịa ọla ebe niile na ndụ ụbọchị ọ bụla. Ọganihu ya na-adigide ya na atụmatụ ndị pụtara ìhè edepụtara n'okpuru ebe a na-eme ka ọ bụrụ ezigbo ihe nkwakọ ngwaahịa maka narị afọ 21st:
Uru nke nkwakọ ngwaahịa:
* Chebe ngwaahịa a ogologo oge; na steeti emechiri emechi, enwere ike ichekwa nri ahụ kpamkpam site na mgbe emechiri ya.
* Gbochie mkpofu ngwaahịa
* Nọgide Na-echekwa nri na-edozi; ịgbatị adị ndụ nke juru n'ọnụ ngwaahịa
* Gbaa mbọ hụ na nchekwa sitere na ọkụ, oxygen na nje
* Ngwaahịa ahụ ka dị ọhụrụ ruo mgbe emepe emepe; ihe ngwugwu ígwè na ogologo oge ndụ nwere ike igbochi ọkụ, oxygen na nje bacteria; enwere ike ijide n'aka na ngwaahịa ahụ ka dị ọhụrụ.
* Ngwongwo na-aga n’ihu inwe nnukwu ikike maka mmepe na ihe ọhụrụ. Usoro ngwa dị iche iche enweghị oke, site na nkwakọ ngwaahịa maka candies na-agba mmiri, vidiyo microwaveable na aerosol na ndị ọzọ. Ngwunye ígwè na-emewanyewanye mgbe niile ma na-emepe emepe iji gboo mkpa nke ndị ahịa na ndị na-azụ ahịa.
Taa, ejirila ọla na ngwaahịa dị iche iche na ihe ngwugwu nkwakọ ngwaahịa, mana ndị na-ese ihe na-aga n'ihu na-achọ ohere ọhụụ iji dọta ndị ahịa. Igbe ọla nwere ụdị dị iche iche, nha na ịchọ mma, enwere ike iji ya:
Nri, ihe ọ beụ beụ, ngwongwo, ngwaahịa onwe onye, ​​mkpa ezinụlọ kwa ụbọchị.
2. Udiri mma
Nkasi obi ka bu isi ihe na-ebughari maka mmepe nke ngwugwu ngwugwu ngwugwu. Mgbanwe ndị a na-enwe n'usoro ezinụlọ, oge ọrụ ha na-agbanwe agbanwe na oge njem na-eduga na mgbanwe n'omume oriri. Familieslọ nkwakọ ngwaahịa na-adịwanye obere, ụdị ndụ na-ebuwanye ibu, ụlọ ọrụ nkwakọ ngwaahịa na-agbanwe mgbe niile iji gboo mkpa ndị a na-agbanwe agbanwe.
Ngwunye metal nwere nnukwu ekweghị ekwe, nke na-eme ka nchekwa ngwaahịa. Ihe mgbochi ya nwere ike ịnọgide na-enwe ezigbo mma na ntinye adịghị ọcha, si otú ahụ na-achọpụta na ọdịnaya dị na ndị ahịa ahụ n'enweghị nsogbu ọ bụla.
Nkwakọ ngwaahịa ígwè na-ezute mkpa ndị ahịa ọhụrụ site na mmeghe dị mfe, mepee nkwakọ ngwaahịa na akụkụ ndị nwere ike ijikwa na-enye ndị ahịa ohere imeghe naanị ihe ha chọrọ. Nhazi nke igwe nwere ike iji ya na oven microwave na-agbasa ịdị mma nke nkwakọ ngwaahịa maka nri dị mfe.
Enwere ike iri nri mkpọ na nchekwa nke ọtụtụ afọ ma dịkwa mma maka nri taa ma ọ bụ maka nsogbu mberede echi. Tankị adịghị mkpa friji ma ọ bụ oyi. Ha na-enye nchebe zuru oke site na ìhè na oxygen, wee kaa akara. Ha nwekwara ike ichebe nri iji gbochie nri nri ị banye n’ime. A na-echebe ngwaahịa ahụ site na mmiri, uzuzu, òké na ndị ọzọ na-emerụ emerụ.
3. Nkwakọ ngwaahịa dị mma karịa
Nkwanye na imepụta ihe na teknụzụ na-enyere ndị nrụpụta aka imepụta ihe ọhụụ. Embossing bụ usoro nke na-ewepụta ihe ndozi ma ọ bụ ihe enyemaka nwere mgbatị a na-ebuli elu (site n'ime ruo n'èzí), ebe de-protrusions na-ewepụta ihe ịchọ mma na concave contours (site n'ime ruo n'èzí). Uru nke akụkụ convex na concave bụ na enwere ike ịdebe akụkụ ndị dị na mpụga, yabụ na ọ dịghị mkpa ịgbanwe njem na pallet. E debanyere ígwè mbụ ahụ na eserese ndị e biri ebi iji mezuo mmetụta anya na mmetụta. Ihe onyonyo na eserese, akara LOGO, ịdọ aka na ntị na ọrụ njirimara.
N'oge a, echiche nke nchedo gburugburu ebe obibi gbanyere mkpọrọgwụ n'obi ndị mmadụ, na ndị na-azụ ahịa nwere mmasị na ngwugwu igwe nwere ike imegharị ya; metal nkwakọ nwere ike recycled 100% mgbe ebighị ebi na-enweghị adịkwa ya pụta ụwa àgwà. Ọ bụ akụ na-adịgide adịgide, na-emegharịgharị n'ụwa niile, yana otu n'ime ihe nkwakọ ngwaahịa nwere ọnụego imegharị ahụ kachasị elu. Ngwongwo na aluminom so n'ime ihe ndị kacha ukwuu n'ụwa, ọ bụ ezie na ihe ndị eji emegharị ihe na-ebelata mmetụta gburugburu ebe obibi nke nhazi.
N'etiti ihe niile ndị na-asọ mpi ngwongwo, ígwè nwere ọnụego mgbake na mgbake kachasị elu, ọ na-arịwanye elu kwa afọ: - Na 2019, ọnụọgụ mgbake nke ihe igwe na ihe ọ aluminumụ aluminumụ mmanya aluminom bụ 80% na 75% n'otu n'otu; imegharị ihe eji belata ike oriri na nnukwu carbon dioxide.
Adress: No.14, Longcheng Mid-ụzọ, Longcheng Street, Longgang District, Shenzhen, China
Akụkọ mmepe na uru nke ...
Esi belata adịghị ike nke metal t ...
Iron igbe nkwakọ bụ naanị i nwere ike '...
Esi ọcha na ịnọgide na-enwe tii tin igbe ...
Ngwaahịa na-ekpo ọkụ / Sitemap
Nkata Nchekwa Metal na mkpuchi, Igbe Tin, Tin Box Nkwakọ, CD Nchekwa Case, Mgbanaka Pull Nwere Ike Imeghe Claw, Ahaziri Tin Box,